Iwo akanakisa matipi ekutenga zvinobudirira pamusika wemusika | Ehupfumi Zvemari
Iwo akanakisa matipi eanobudirira kutenga pamusika wemusika
Zvirokwazvo chimwe chezvishuwo zvako zvenguva pfupi mukudyara ndechekutenga migove mumari uine zvimwe zvivimbiso zvekubudirira. Zvakanaka, kutenga kwakanaka pamisika yemasheya idanho rakakosha rinokutungamira kuti uve nechokwadi chekuti zviwanikwa zvemari hazvina kureba kuuya. Kune izvi, zvinodikanwa kuti iwe utore nhevedzano yekuchengetedza uine chinangwa chekuti kutora kwakaipa kwezvinzvimbo kunogona kuremedza mari iwe yauchazokudziridza kubva zvino zvichienda mberi.
Mupfungwa iyi, zvinonyanya kushanda kuti zvisati zvaitika kutora zvinzvimbo mune kukosha iwe unodzidza hunyanzvi uye hwakakosha chimiro. Iwe haugone kumira kuita chiito ichi sezvo mhedzisiro yacho inogona kukuvadza pane yako yepazasi mutsara. Kunyanya, nekuti iwe uchave nemukana wakakura wekuvandudza hurema hunogona kukanganisa account yako yekuchengetedza, zvirinani munguva pfupi. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu aunofanirwa kudzivirira pamusoro pezvimwe zvese zvinoonekwa.
Ehezve, zvinoshanda kwazvo kupinda mu zvikamu zvakanyanya zvekuwedzera nguva dzese kugadzira yakasimba uye yakaenzana portfolio yekuchengetedzeka. Uye kuti inogona zvakare kutsigirwa nedzimwe chaiyo chaiyo data rakakosha kubva kumakambani. Iri ibasa raunofanirwa kuita usati waita sarudzo yezve kwaunofanirwa kunongedza mari dzako panguva iyoyo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye izvo zvakatove zvakurukurwa mune ino blog.
1 Mirayiridzo yekutenga pamutengo wakanaka
2 Koshesa kuongorora kwehunhu
3 Zviito izvo zvisingafanire kuitwa
4 Tora mukana wekucheka
Mirayiridzo yekutenga pamutengo wakanaka
Vashoma investor vanofanirwa kuenderera kuve nemitemo yakasimba yekuita maitiro avo ekutenga. Mune ino kesi, kuburikidza nhevedzano yemazano angave anonyanya kubatsira pane imwe nguva muhupenyu hwako. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera mumisika yemari:
Sarudza tsika dziri mu kukurudzira kufamba. Ndidzo vimbiso yakanakisa kuitira kuti parege kuva nezvikanganiso muchisarudzo uye kana ichigona kuve pasi pechirevo chekusununguka, saka zviri nani pane zvaunofarira. Zvichava zvakanyanya kuomarara kuti usakwanise kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda.
Kutenga tsika padyo neyavo tsigira mitengo. To gare gare tengesa ivo munzvimbo yekupokana, kunyangwe zvakare muchiitiko chekuti zvitsigiro zvakaputswa. Iyo ndeimwe yemaitiro akareruka anoshandiswa mumusika wemasheya, kunyangwe izvi zvichikosha kuti uchengete nguva yekuona shanduko yemitengo yemitengo yezvinhu.
Maitiro ayo varova pasi: icho chimwe chezviitiko zvakanakira chero mushambadzi anofanirwa kubata nekutenga. Asi nekusagadzikana kuti zvinonetsa kwazvo kuti uone poindi chaiyo panogadzirwa nhanho idzi.
Pinda zvikamu zvakanaka kwazvo: Iyi imwe sarudzo iri inonakidza, inosanganisira kubheja pamasheya anobatanidza zvikamu zvine tarisiro yakanaka yekukura kwemwedzi iri kuuya. Iine huwandu hwakawanda hwekuongorora hunogona kupfuura mune mamwe masiteki emakesi zvikamu.
Koshesa kuongorora kwehunhu
Kudzidza yako yehunyanzvi uye yakakosha ongororo izano rakanaka rekupinda mumisika yequity nemutengo wakanaka. Kusvika padanho rekuti iko kuvhiya kunogona kukusevha mari yakawanda mukugadzirisa mumatengo ekutenga nekutengesa emasheya.
Kune rimwe divi, tsvaga tsika ne kukoshesa kwakakwirira kugona Iyo inogara ichikurudzirwa zvakanyanya nekuda kwekuchengetedzeka kwainopa mumabasa edu emusika wemasheya Iri zano raizosanganisira kutsvaga izvo kuchengetedzeka izvo zviri kure kure nemutengo wavo, uye nekudaro vane mwero wepamusoro wekutenda. Panguva ino, unogona kuwana zvakatengwa zvakaderedzwa kusvika pamakumi matatu muzana pamutengo wavo wakapihwa nevamiriri vezvemari.
Kurudziro kubva nevaichinja: vamiririri vezvemari nguva dzose seta akawanda akakodzera maitiro kupfuura vamwe kuti vatenge. Ichi chiratidzo chinoteverwa zvakanyanya nechikamu chikuru chevashambadziri, kunyangwe paine kusagadzikana kwekuti pane dzimwe nguva fungidziro hadziwanikwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Usaisa panjodzi mumasarudzo. Nzira dzakachengeteka dzekudyara dzinogona kushandiswa kupfuura dzimwe. Semuenzaniso, sarudza hunhu hwakanyanya hunochengetedza: kwete hwakanyanya, husingavimbike, hwakadzikama mumitengo yavo uye unobhadhara zvikwereti pagore. Sarudzo yezano iri inozoitirwa kutora chinzvimbo mune yepakati kana yakareba. Chero zvazvingaitika, hazvimboiti zvekuvhiya kunoitwa pazuva rimwe chete kana kunyange kwemavhiki mashoma kubvira pavanoda kumwe kurapwa.
Wongorora mitengo pamwe nekujairika: kuratidza kuti inguva yakakodzera yekudyara, hazvingakuvadze kuongorora mamiriro eruzhinji rweindekisi yatichazotora zvinzvimbo, kungave kwenyika kana kwepasirese. Ichapa vimbiso huru mumusika wega wega kubheja, pamwe nebasa rekushandisa rinobudirira kuzadzisa zvinangwa zvedu zviripo. Kusvika padanho rekudzivirira zviitiko mune yedu yekudyara portfolio kubva ipapo zvichienda mberi.
Zviito izvo zvisingafanire kuitwa
Pane zvinopesana, pane akateedzana enongedzo, ayo nekuda kwekuita kwavo kunopokana, haafanire kushandiswa kana kufambisa mari muzvikwereti. Kunyanya nekuti ivo vanogona pasina mubvunzo kukuvadza vadiki nepakati varimi. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuchengetedza zviito izvi mupfungwa kuti zvirege kuwira mazviri uye, kwete inogona kuyera pasi kubatsirwa kwekudyara kwedu. Izvo zvinotungamira zvinotungamira mukuchengetedza munzvimbo dzese kutora nevashandisi vemusika wemasheya. Semuenzaniso, kuburikidza nezviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Tenga kutenga, ndiko kuti, sarudza chengetedzo zvisinei nehunyanzvi kana chakakosha chinhu icho chainacho panguva iyoyo. Inotungamira mune dzakawanda zviitiko kune zvisingadiwe mhedzisiro.
Iva nemamiriro ekuvhura nzvimbo munzvimbo dzekuchengetedzeka ne simba rekufungidzira repamusoro nekutenda kwenhema kuti zvichakwanisika kuwana mari inowanikwa nyore nyore. Ivo vane njodzi huru uye muzvinashawo anofanira kuziva njodzi dzaanopinza pakubheja padziri.
Pinda mumusika mune bearish nguva uko mutengo wekutenga unogona kutora nguva yakareba kuti usvike. Ndoizvo zvinonzi zvakashata kuti "zvakasungirirwa".
Tora kutorwa ne mazano asingazivikanwe kana mapato anofarira anogona kuvhiringidza muzvinashawo mune zano rake rekupinda mumisika yemasheya.
Tora zvinzvimbo kana chengetedzo inenge yatoziva zvizere Maitiro ekuwedzeraSezvo chinhu chega chakasara kudzoka pakutengesa zvinzvimbo mushure mekukoshesa kwenguva yakati rebei kana shoma.
Chengetai mumatura ari mune yakasarudzika bearish maitiro, nekutenda kuti kupora kwako kuri munguva pfupi. Kunze kwekunge iwo musika uchipa pachena zviratidzo zvekutenga, zvirinani kurega kubva kwavari.
Uye, kutarisisa kwakakosha kune kukosha kuri chinhu yemakambani mafambiro, runyerekupe kana shanduko mune avo vagovana. Kwete pasina, vanozivikanwa nekuti vanogona kudzikisira mune mashoma masiteki emusika, asiwo mapopoma anogona kudomwa uye muzvikamu zvishoma vanogona kudonha zvine simba mumutengo wavo. Iyi kirasi yemazano ekudyara inoitirwa kune vane ruzivo vane mari kwazvo vane ruzivo kana vachiisa mari mukirasi ino yekuchengetedzeka. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo vanonyatso ziva maitiro avo.
Mukukwira kumusoro, mutemo wakajairika pakati pevamwe vane ruzivo vane mari ndeyekumirira kucheka mumitengo yemakambani kupinda mumusika. pamitengo yemakwikwi. Iri zano rakajairika mukudyara rinogona kutungamira kurwendo rwepamusoro kumusoro mukukosha uye, nekudaro, mikana mikuru yekuwongorora.
Izvo hazvigone kukanganikwa kuti izvi zvakatemwa zvinoitika kana paine kumwe kuneta munzvimbo dzekutenga nekutengesa zvinotanga kuyangarara, ndokuti, apo musika unowedzerwa. Hazvishamise kuti kugadziriswa kwemitengo kunodiwa kuti uenderere mberi nekukwira kumusoro. Aya mabhureki anonzwisisika kune rumwe rutivi mumutengo wemutengo wako anodikanwa zvakanyanya sezvo ichikurudzira kutengesa kutanga kubuda. Zvinoitika kakati wandei panguva yeanosimudzira mafambiro, kunyangwe vaongorori vemusika wemasheya vanozvitsanangura se “kufamba kwakakwana kwemusika”Izvo zvinoshandira indices, zvikamu kana masheya kuti awane simba rakawanda muzvikamu zvinotevera zvekutengesa.
Ivo vanonyanya kukodzera kune avo varairidzi vari kunangana nepfupi izwi uye vanoda kunyatso fambisa yekumusoro mafambiro anowanikwa neyakaenzana. Chimwe chezvikonzero zvacho chakakosha ndechekuti zvinogona kudaro uve nenhamba yakakura kwazvo yezvikamu nemari yakafanana mukudyara. Chiito chinosimudzirwa apo masecurity achigovera zvikamu pakati pevachagovana navo nekuti zvichatoreva kubatsirwa kukuru muripo wenguva dzose unoitwa nguva zhinji.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti iri zano rinogona kugadzirwa kuti zvishoma nezvishoma rive bhegi rekuchengetedza rakatsiga. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Zvekuti chinangwa chekupedzisira chasangana, zvinova zvinoita kuti mari yakasimwa ibatsire, zvinova ndizvo zvazviri mushure mezvose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iwo akanakisa matipi eanobudirira kutenga pamusika wemusika
Zvakanakisa zvigadzirwa zvekudyara mune yakatarwa uye inoshanduka mari
Matipi Ekudzora Njodzi mu Forex Kutengesa